Izinzuzo ze-Ultrasonic Extraction - Hielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "Izinzuzo ze-Ultrasonic Extraction"
Isizinda se-ultrasonic noma i-sono-isizinda yinqubo yokwandisa ubuchwepheshe, esebenza ngokuhlanganiswa kwamandla aphakeme e-ultrasonics abe yi-slurry yezitshalo noma izicubu zesisindo. I-Hielscher Ultrasonics inikeza i-ultrasonicators enokwethenjelwa yeseli ukuphazanyiswa kanye nesisetshenziswa kusuka kumasampula amancane webhu kuze kufinyelele emigqumeni ephezulu ekusetshenzisweni kwezimboni. Isikhalazo se-ultrasonically isizinda sesisizo sisekwelapha okungasetshenzisiwe kwezinto ezibonakalayo, uhlelo lwaso olulula nokulinganisa kusuka ekuhlolweni kuya esikalini sokukhiqiza. Amadivaysi e-ultrasonic kaHielscher enza i-ultrasound ephakeme kakhulu engakwazi ukulawulwa ngokufanele emigomeni yakho yokusebenza.
Ukwahlukana kwezakhiwo zeseli (lysis) kusetshenziswa i-ultrasound kusetshenziselwa ukukhipha amakhemikhali angaphakathi kwamaselula noma ukungasebenzi kwe-microbial. Ingemuva Ku-microbiology, i-ultrasound ngokuyinhloko ihlotshaniswa nokuphazamiseka kweseli (lysis) noma ukubola (i-Allinger 1975). Lapho i-sonicating uketshezi ngamandla amakhulu, amaza omsindo asakazeka kwimithombo yezindaba ewuketshezi aholela ekushintsheni imijikelezo ephezulu yengcindezi (ingcindezi) nengcindezi ephansi (ye-rarefaction), ngamazinga ngokuya ngemvamisa. Ngesikhathi somjikelezo onengcindezi ephansi, amagagasi e-ultrasonic aphezulu enza…
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic noma ukukhishwa kwe-sono kuyinqubo ekhulisa ubuchwepheshe, esebenza ngokuhlanganiswa kwamandla aphezulu e-ultrasonics kusiyaluyalu sesitshalo noma samaseli weseli. I-Hielscher Ultrasonics inikezela ngama-ultrasonicators athembekile wokuphazamiseka kweseli nokukhipha kusuka kumasampula amancane welebhu kuze kufike kumanani aphezulu ekusebenzeni kwezimboni. Ukukhalaza kokukhishwa okusizakala kwe-ultrasonical kulele ekwelashweni okungasebenzi okwenziwe ngezinto ezibonakalayo, ukusetshenziswa kwawo okulula kanye nobukhulu kusukela ekuhlolweni kuya esikalini sokukhiqiza. Amadivayisi we-Hielscher's ultrasonic akhiqiza okukhulu kakhulu…